မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: မြန်မာ့ရေနံနဲ. သဘာဝဓါတ်ငွေ.သိုက် ကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်နေပြီ
မြန်မာ့ရေနံနဲ. သဘာဝဓါတ်ငွေ.သိုက် ကြောက်ခမန်းလိလိတိုးတက်နေပြီ
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ. အရံသိုက်တွေ. ရှိမှုပမာဏာကို BP ကုမ္ပဏီရဲ့ စာရင်းဇယား ဌာနက ထုတ် ပြန် ကြေငြာပါတယ်။ ရေနံ စိမ်း စည်ပေါင်း၃.၂ ဘီလီယံ အထိခန်.မှန်းတွက်ချက်ထားပြီး သဘာဝ ဓါတ်ငွေ. ကတော့ အရင်နှစ်တွေကထက် ၃ ဆခန်.တိုးတက်လာပြီး ၈၀၀ ဘီလီယံကုဗမီတာလို.ဆိုပါတယ်။
တစ်နေ.ကို ရေနံစိမ်းစည်ပေါင်း တစ်သန်း ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ၁၀ နှစ် ဆက်တိုက်ထုတ် လုပ်နိုင်မဲ့ပမာ ဏဖြစ်နေပါပြီ။ သဘာဝဓါတ်ငွေ.ဟာ ၁၀၀၀ ကုဗမီတာကို ဒေါ်လာ ၁၆၀ ခန်.ရှိတဲ့အတွက် တစ်ကုဗဘီလီ ယံရဲ့ပေါက်ဈေးဟာ ဒေါ်လာ သန်း ၁၆၀ ခန်.ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ဟာ ၁၂ ဘီလီယံကုဗ မီတာ×သန်း ၁၆၀ ပမာဏထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ရှေ.ဆက်ပြီး တိုးတက်ထုတ်လုပ်ဖို.ပဲရှိနိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀၊ တစ်ထောင်လောက် ကို အလွယ်တကူချေးငှားမယ့်သူတွေရှိ နေပါပြီ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေနံသိုက်ပမာဏကို အခြားနိုင်ငံများနဲ. နှိုင်းယှဉ်ဖေါ်ပြရာမှာ တရုတ်- ရေနံစည် ပေါင်း ၁၄.၈ ဘီလီယံ။ မလေးရှား- ၅.၈ ဘီလီယံ၊ ဗီယမ်နမ်- ၄.၄ ဘီလီယံ အင်ဒိုနီးရှား- ၄.၂ ဘီလီယံစည် တို.ဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါ ကမ္ဘာမှာ ရေနံသိုက်တွေ.ရှိမှု အဆင့် ၂၆ ဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်နိုင် ငံနဲ. တန်းတူဖြစ်သွား ပါတယ်။ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ.ကတော့ ကမ္ဘာ အဆင့် ၂၈ ရှိတဲ့ အိုမန်နိုင်ငံနဲ.တန်းတူဖြစ်သွားပါပြီ။ ယခုကိန်း ဂဏန်းတွေဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ၂၀၁၁ မှာ အများကြီးပိုနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေနဲ. နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေ ပိုမိုလိမ်မာပါးနပ်ကြဖို.လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှ ဟန်ပြစီး ပွားပိတ်ဆို.ပြီး ရေနံနဲ. သဘာဝဓါတ်ငွေ.ကိုတော့ ကုန်အောင် တူးနေကြပါပြီ။ ရေနံနဲ.သဘာဝဓါတ်ငွေ.ကို ဘယ် သူမှာ SANCTION မလုပ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလည်း SACNTION တစာစာ အော်ပြီး အစိုးရကိုဖိအား ပေးတဲ့နည်းနာ ကို ကျင့်သုံးကြဦးမှာလား၊ အစိုးရကိုအဲဒီလိုဖိအားပေးလို.ရမယ်များထင်ပါသလား။
မြန်မာပြည်က ရေနံနဲ. ဓါတ်ငွေ.သိုက်တွေကို တူးယူပြီး ရယ်သွမ်းသွေးနေမဲ့ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ရယ်သံကို သင်တို.ကြားနိုင်ပါသလား။ ဓါတ်ငွေ.ရောင်းရငွေနဲ. မြန်မာတွေ သေအောင်သတ်ကြဖို. လက်နက် တွေလည်း ရောင်းကြဦးမှာပါ။ အမေရိကနဲ. ဥရောပမှာ စီးပွားပျက်ပြီး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ မြန်မာ့အရေးကို ဘယ်သူမှစိတ် ၀င်စားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို.ဖြစ်ပါတယ်။
Western oil groups eye Myanmar changes cautiously
Tue Oct 11, 2011 1:00pm GMT
LONDON Oct 11 (Reuters) - International energy groups say recent signs of political change in autocratic Myanmar are unlikely to lead toarapid expansion of their activities in the country, which holds valuable reserves of oil and gas.
Christophe de Margerie, Chief Executive of France's Total SA , said his company, which hasaproject in the former British colony, would like to playabigger role in the country, formerly known as Burma, but had to see concrete signs of increased democratisation before this was possible.
Western trade sanctions have been in place since the military crusheda1988 student uprising isolating Myanmar's army dictatorships but in March, the army nominally handed over power to civilians after elections in November. The process was ridiculed at the time asasham to cement authoritarian rule behindademocratic facade.
It was followed by other overtures such as calls for peace with ethnic minority guerrilla groups, some tolerance of criticism and more communication with Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi, who was released last year from 15 years of house arrest.
On Tuesday, state television said 6,359 prisoners would be freed on Wednesday and political detainees are expected to included.
"We decided that... it was important to be in Myanmar but that we will not invest until things are getting better... I do hope that will happen," Total's de Margerie told reporters on the sidelines of the Oil and Money conference in London.
Total leads the $1 billion Yadana gas project in the Andaman Sea, and the CEO said he would like to back additional exploration and production investments.
U.S. oil major Chevron isapartner in Yadana but Washington banned new investments in Myanmar by U.S. companies in 1997 and barred imports.
New investments by western oil companies could beaboon for the companies which build and supply their facilities but Andrew Gould, chief executive of the world's largest oil services company, Schlumberger , said it was too soon to tell the implications from the recent political easing.
Myanmar's crude oil reserves are estimated at 3.2 billion barrels, the energy ministry has said. This compares with China's proven oil reserves of 14.8 billion barrels, Malaysia's 5.8 billion, Vietnam's 4.4 billion and Indonesia's 4.2 billion barrels, at the end of 2010, according to the BP Statistical Review.
The country's proven gas reserves tripled in the past decade to around 800 billion cubic metres, equivalent to more thanaquarter of Australia's, BP Statistical Review figures show.
Malcolm Brinded, Executive Director for Upstream International, Royal Dutch Shell PLC and Ali Moshiri, President, Chevron Africa and Latin America Exploration and Production Company all declined to talk about possible new investments in Myanmar.
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:50 AM
ဒါတောင် .... ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ဟာ ဆင်းရဲးတွင်းထဲမှာရှိနေတုန်းပဲ။